LM7805: ihe niile gbasara voltage regulator | Akụrụngwa n'efu
LM7805: ihe niile gbasara voltage regulator
Isaac | | Ihe eletrọniki
El LM7805 bụ voltaji regulator, ma ka aghara inwe mgbagwoju anya na onye na-ekewa voltaji nke anyi kwurula banyere ya na edemede ozo anyi gara aga. Tụkwasị na nke a, ọ bụghị naanị nchịkwa voltaji ọ bụla, mana ọ bụ otu n'ime ndị na-eme ihe na ụdị ọrụ Mee N'onwe Gị. Ọrụ ya, dị ka aha ya na-egosi, bụ ịhazi mgbaàmà voltage nke sekit nke etinyere ya.
Akụrụngwa anaghị adịcha mma na ya, na oge ụfọdụ, ewepụtara maka ọtụtụ ọrụ. Mana nke ahụ bụ eziokwu dị mkpa ma ọ bụrụ na ịchọrọ mgbaàmà voltaji kwụsie ike. Ihe kachasị mkpa bụ LM7805 mgbe ị na-ekepụta sekit ike maka sekit anyị. Dịka ọmụmaatụ, iji mepụta ike ọkụ eji arụ ụlọ nwere njirimara ụfọdụ, otu n'ime ndị na-achịkwa a ekwesịghị ịhapụ.
1 Kedu ihe bụ voltaji regulator?
2 Ngwa ndị na-achịkwa voltaji
3 7805: pinout na mpempe akwụkwọ data
3.1 Modelsdị ndị ọzọ
3.2 Ebe izu
4 Mmekọrịta na Arduino
Kedu ihe bụ voltaji regulator?
Un voltage ma ọ bụ voltage regulator dị ka LM7805 bụ ngwaọrụ nke nwere ike ịgbanwe mgbaàmà voltage ọ na-enweta na ntinye ya ma nyefee mgbaàmà volta dị iche na mbupụta ya. Na mmepụta ahụ, voltaji na-adịkarị ala ma nwee ụfọdụ njirimara ndị achọrọ iji zere ihe ize ndụ ma ọ bụ maka sekit nke a na-enye ya ka ọ rụọ ọrụ nke ọma, ọ bụrụ na ọ na-eche mgbanwe dị iche iche.
Iji mee ka nke a kwe omume, voltage voltage regulator nwere eriri dị n'ime ya na usoro nke resistors na transistors bipolar ejikọrọ n'ụzọ dị otú ahụ nke na ọ na-enye ohere ịmachaa ụda voltaji n'ụzọ dabara adaba. You nwere ike ịhụ eriri dị n'ime nke etinyere na ngwugwu nke ngwaọrụ a na foto dị n'elu.
Movilideas 10 Nkeji nke ...
Na ahịa e nwere ọtụtụ ndị na-achịkwa volta dị iche icheee, imirikiti ha dị ọnụ ala. E wezụga LM7805 ị ga-ahụkwa 7809, 7806, 7812, wdg, site na ezinụlọ 78xx. Ọ bụ ezie na n'isiokwu a, anyị ga-elekwasị anya na 7805, ịbụ otu n'ime ndị kachasị ewu ewu.
La ọdịiche dị n'etiti onye na-ahazi volta na onye na-ekewa ihe erughị ala doro anya. Onye na-ekewa ekewa ihe ntinye na ntinye n'ime otutu voltages ala karia nputa ya, ma adighi edozi mgbaàmà maka voltaji. N'aka nke ozo, na ihe nlekota voltaji, a na-enweta volta yiri ya na mmeputa, ma ya na akara nke oma karie nke enwetara na ntinye ya.
Ngwa ndị na-achịkwa voltaji
Dịka i chere, enwere ike iji IC dị ka LM7805 maka ọtụtụ ihe. Ọmụmaatụ, ike onunu ha na-agwakọta otu n'ime usoro 78xx. N'ezie, ike, dị ka anyị kọwara na mbụ isiokwu, nwere ọtụtụ nkebi:
Ihe ntụgharị: enwere ike ịgbanwe ntinye ntinye nke 220v ka ọ dabara adaba na 12, 6, 5, 3, 3.3 ma ọ bụ uru ọ bụla.
Ndagharị Bridge: mgbe ahụ mgbaàmà ahụ ga-enwe voltaji kwesịrị ekwesị, mana ọ ga-anọgide na-abụ akara ngosi ọzọ, mgbe ọ gafere akwa a, a na-ezere mgbaàmà na-adịghị mma.
Ndị ike: ugbu a mgbaàmà ahụ nwere ọdịdị nke mounds, ya bụ, ụfọdụ ihe nrịbama nke na mgbe ị na-agafe site na capacitor ga-edozi, ebe ọ fọrọ nke nta ka ọ bụrụ akara kwụ ọtọ.
Onye na-ahụ maka erughị ala: n'ikpeazụ, onye na-achịkwa ya ga-anụcha mgbaàmà a iji mee ka ọ dị larịị ma kwụsie ike, ya bụ, ime ya ka ọ bụrụ akara ngosi ugbu a.
Ndị ọzọ ihe omuma atu nke onye na-achịkwa voltage ga-abụ iri nri ụfọdụ sekit na-enweghị ike ịnye nri nke gafere akara ọgụgụ. Dịka ọmụmaatụ, cheedị ihe mmetụta ma ọ bụ mgbawa nke na-enweghị ike ịgafe 3.3v nke ike. Ọfọn, na nke a, enwere ike iji onye nchịkwa iji zere ihe ize ndụ nke gafere ihe mgbochi ahụ. All ngafe ike dissipated dị ka okpomọkụ site 78xx.
LM317: ihe niile gbasara ihe ntanetị nwere ike idozi
7805: pinout na mpempe akwụkwọ data
Enwere ndị nrụpụta dị iche iche nke LM7805, dika STMicroelectronics, TI, Sparkfun, wdg. Na mgbakwunye, ịnwere ike ịchọta ya na ngwugwu ọdịnala ya na modul iji mee ka ọ dịrị gị mfe ijikọta na ọrụ gị na Arduino. Dabere na ihe nlereanya ị zụtara, m na-adụ gị ọdụ ka ịnweta ụlọ ọrụ gọọmentị nke ndị nrụpụta iji lelee njirimara ndị dị na mpempe akwụkwọ nkọwa maka ihe nlereanya. Cheta na n’agbanyeghi na ha niile yiri onwe ha, enwere ike inwe mgbanwe site na ndi na emeputa ya na nke ozo.
Ọ bụrụ n'ịzụrụ ya na ngwugwu TO-220, ị ga-ahụ 3-pin pinout. A na-agụ ha ọnụ na otu kwekọrọ na ntinye voltaji nke ịchọrọ ịmegharị, nke etiti abụọ bụ GND ma ọ bụ ala (nke nkịtị), akara nke atọ bụ maka mmepụta nke voltaji akararịrịrị, ya bụ, mgbaàmà kwụsiri ike na anyị ga-eji dị ka ọkọnọ nke mmetụta dị nro circuit na anyị chọrọ ịrụ ọrụ. Mana ị ga-agbakwunye ụfọdụ mgbakwunye dị ka ndị na-arụ ọrụ ike dị ka ndị nrụpụtara na-atụ aro ka mmepụta ahụ zuru oke.
N'ihe banyere modulu ahụ, ọ dị ntakịrị ọnụ, mana ọ nwere ike ime ka ihe dịrị gị mfe. Ọ gụnyere ngwaọrụ 7805 yana kwa ihe ndị ọzọ ị ha ga - eme ka ọ dị mfe iji ya na Arduino. Don'tchọghị ndị nwere ikike ma ọ bụ ihe ọ bụla ọzọ. Tụkwasị na nke ahụ, ọ na-agụnye ihe ọkụkụ iji nọgide na-enwe okpomọkụ kwesịrị ekwesị site na ịgbasa okpomọkụ nke 78xx na kaadị njikọ abụọ maka ntinye na ntinye (Vcc na GND na njedebe ọ bụla), na-eme ka mmejuputa ya.
Modelsdị ndị ọzọ
na ọdịiche dị n'etiti ụdị dị iche iche dị na usoro 78xx nke ndị na-achịkwa volta dị mfe. Onu ogugu soro ezinụlọ a gosiputara oke voltaji nke onye obula na akwado. Ọmụmaatụ:
LM7805: 5v na 1A ma ọ bụ 1,5A na ụfọdụ.
Ọ bụrụ n'ịchọrọ ịzụta ya, ị nwere ya dị na Amazon, na mgbakwunye na ụlọ ahịa elektrọnik ndị ọzọ pụrụ iche. Dị abụọ dị iche iche ị nwere ike ịzụta bụ:
Achọpụtaghị ngwaahịa ọ bụla. Na ngwugwu TO-220 maka € 4 ị nwere ike ịzụta 10 nke ngwaọrụ ndị a.
LM7805 na modulu maka naanị n'okpuru € 6 kwa otu.
Dị ka ị hụrụ, ha dị ezigbo ọnụ ala ngwaọrụ...
Mmekọrịta na Arduino
Ọ bụrụ na ị na-eche banyere ya iwekota na oru ngo na Arduino ma ọ bụ Ras Pi ma ọ bụ ụdị ọzọ nke osisi, Enweghị nsogbu. Notkwesighi iji ọba akwụkwọ akọwapụtara dị ka ihe ndị ọzọ, ma ị gaghị etinye koodu na Arduino IDE gị, ebe ọ bụ na 78xx a nwere onwe ya ma raara onwe ya nye iji gbanwee mgbaàmà ntinye volta. Ikwesiri inwe ihe omuma elektrọnik dị mkpa iji debe ya na ebe kwesịrị ekwesị na okirikiri gị ...
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụrụngwa n'efu » Ihe eletrọniki » LM7805: ihe niile gbasara voltage regulator
Pushbutton: otu esi eji ihe a dị mfe na Arduino
HC-SR04: ihe niile banyere ihe mmetụta ultrasonic